DAAWO: Baarlamaanka Puntland oo 4 baabuur loogu deeqay.
GAROOWE(P-TIMES) – Guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa maanta kala wareegay Hay’adda UNDP ee Horumarinta u qaabilsan Qaramada Midowbay 4 baabuur oo kamid noqonaya kuwa lagu fuliyo howlaha joogtada ah ee baarlamaanka maamulkaas. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa […]
Masuuliyiin katirsanaa Jubbaland oo lagu xiray Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde lagu qabtay gudoomiyihii Jubbaland ugu magacownaa magaalada Garbahaaray ee xarunta gobalka Gedo Iimaan Cadow Kaarshe, […]
DF Soomaaliya oo baaritaankii Qaraxii Eng Yariisow ku dhintay baahinaysa & Xog hordhac ah.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey in ay saacadaha soo socda baahin doonta macluumaadka la xariira weerarkii Argagixiso ee lagu qaaday Xarunta gobalka Banaadir oo ay ku geeriyoodeen lix gudoomiye degmo, Gudoomiyaha […]
DAAWO: Maxaan ka ognahay Sharuudaha DF Soomaaliya ku fasaxday Diyaaradaha Kismaayo?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay laamaha Ammaanka iyo Saadasha Hawada ee dawladda Soomaaliya ku soo rogeen duulimaadyada Kismaayo aadaya sharuudo gaar ah oo ah kuwa ay tahay in ay fuliyaan si u […]
DAAWO+SIR LAHELAY: Yaa sii daayay Ciise Tarabuun, Goorma ayuuse ka baxay Muqdisho?
MUQDISHO(P-TIMES) – Si weyn ayaa loo hadal-hayaan macluumaad ku saabsan Madaxii Amniyaadka Al- Shabaab ee gobalka Banaadir Ciise Tarabuun oo ay Kenya sheegtay in uu bishan September soo galay gudaha dalkeeda, waxayna soo saartay war […]
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya Puntland & Somaliland oo ka socda G Sanaag?
BADHAN(P-TIMES) – Wararka Laga Helayo Gobolka Sanaag Ayaa Sheegaya In Laga Dareemayo Dhaq Dhaqaaq Ciidan oo Xoogan Puntland Iyo Soomaliland,Soomaliland Ayaa Ciidamo badan gobolka gaysey Kadib markii inta Badan Puntland Siyaasad Kula wareegtey Lagana tageeray. […]
Boqolaal kamid ah Milateriga Sacuudiga oo ay Xuutiyiinta Yemen qabsadeen.
Xutiyiinta mucaaradka ah ayaa sheegay inay nolosha ku qabteen tiro ciidamo Sacuudiga ah ka dib markii ay weerar xooggan ku qaadeen goob u dhow xadka ay labada dal wadaagaan. Afhayeen u hadlay Xutiyiinta ayaa BBC-da […]
XOG: Sirdoonka Soomaaliya & Kenya oo dagaal adag ka dhex bilowday, ka dib Xaaladda Ciise Tarabuun?
NAIROBI(P-TIMES) – Saacado uun markii uu soo baxay warka sheegaya in ay Kenya baahisay sawirka iyo macluumaadka nin magaciisa lagu sheegay Cabdixaawid Khaliif Cabdi loo yaqaano Ciise Tarabuunka oo ay dawladda Soomaaliya sheegtay in ay […]
Puntland oo Garoowe ka bilowday howlgal dhimasho Sababay & Dad badan oo ka hadlay.
September 29, 2019 NEWS 3
GAROOWE(P-TIMES) – Dawladda Hoose ee magaalada Garoowe ayaa ka bilowday caasumada, in la baneeyo dhammaan guryaha dawladda ee kuyaala magaalada iyo Hantida laga hor dhistay, waxaana talaabadaa shalay ku geeriyooday mid kamid ah Saraakiisha dawladda […]
Kenya Oo Shaacisay In Dalkeeda Uu Soo Galay Sarkaal Weyn Alshabaab Ah , Sawirkiisa Ayay Soo Bandhigeen
Ciidamada Booliska Dowladda Kenya ayaa shaaciyay in uu dalka Kenya soo galay ninka lagu magacaabo Ciise C/khaliif Cabdi (Ciise Trabuun), iyagoo soo bandhigay muuqaalkiisa, iyagoo dadka ka dalbaday qofkii arka in ay Booliska ugu wargliyaan […]
Saraakiil Iyo Dagaalyahano Ka Tirsan Al-Shabaab Oo Xalay Lagu Laayay Shabeelada Hoose
Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa Midowga Midowga Afrika ee AMISOM ayaa fiidnimadii xalay duqeyn ku dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay sheegtay warbaahinta dowlada. Duqeyntan ayey ciidamadu ka fuliyeen duleedka Koonfureed […]
September 29, 2019 shiine maxamed 0
Xisbiga Wadani Ayaa u Muuqda Awooda Inuu La Wareegey Maamulkaasi,waxaana Ku Biiray Siyaasin Waweyn oo Qaarkooda Xilal Sare Soomaaliya Ka Qabtay,Raga hada Xisbiga Ku Biiray waxaa Ka mid Ah Cali Khaliif Galaydh oo lagu Wado […]
DEG DEG: Horjoogayaal Shabaab ah oo caawa lagu dilay Duqeyn ay geysteen ciidamada Xooga Soomaaliyeed
Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Midowga Afrika ee AMISOM ayaa fiidnimadii hore ee caawa Duqeyn ku dilay Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Argigixisada Al-Shabaab. Duqeyntan oo ay Ciidammadu ka fuliyeen duleedka Koonfureed […]
DFS oo ku dhawaaqday in ay xayiraadii ka qaaday garoonka Kismaayo.
MUQDISHO(P-TIMES) – Sidda laga baahiyey warbaahinta dawladda Faderaalka ay maamusho waxaa si rasmi ah xayiraadii looga qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, ka dib markii mudo shan maalmood ah aysan ka dagin wax duulimaad shacab […]
Duulimaadyadii Kismaayo oo dib u furmay.
KISMAAYO(P-TIMES) – In ka badan sadex duulimaad diyaaradeed ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah Jubbaland, ka dib markii ay dhamaatay maalmihii ay amarada kusoo rogtay Laanta Saadaasha Hawada iyo socdaalka ee dawladda […]
Beesha Caalamka & Hogaamiyaasha Soomaalida oo ku kulmaya todobaadkan Muqdisho.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay caasumada Muqdisho martigalin doonto kulanka 2aad ee Beesha Caalamka iyo Madaxda Soomaalida oo kisii koowaad ka dhacday xarunta Midowga Yurub sannadkii hore, waxaana kulanka hadda looga […]
AKHRISO: Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir oo kajawaabay hadal kasoo yeeray dalka Qadar, uguna digay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa noqday siyaasigii koowaad ee ka jawaabceliya hadal kasoo yeeray dawladda Qadar, oo ay ku baaqeysay in ay Soomaalida looga baahan yahay daganaansho siyaasadeed, […]
DEG DEG+DAAWO: Cali Khaliif Galeyr oo si adag ula hadlay Muuse Biixi, cadeeyeyna.
BURCO(P-TIMES) – Hogaamiyaha Khaatumo State ee horey iskugu dhiibay maamulka Somaliland Cali Khaliif Galeyr oo ka hadlayay magaalada Burco oo uu kaga qeybgalayey shirka Xisbiga mucaaradka ah ee WADANI, ayaa sheegay in aan wali la […]
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Soomaaliya, waxay todobaadkii hore qaaday labo talaabo oo aad laysku weydiiyay oo ku wajahnaa xagga mucaaradka, markii ay u diiday in ay tagaan magaalada Kismaayo, kana joojisay duulimaadyo diyaaradeed. Madaxdii hore iyo […]
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa si rasmi ah uga codsaday Boostada Turkiga inay gacan ka geystaan sidii loo soo nooleyn lahaa boostada dalkeena oo gebi ahaanba ku burburtay dagaalladii sokeeye […]